Ihe ịga nke ọma n'ịntanetị na CXM | Martech Zone
Njikwa Ahụmịhe Ndị Ahịa na-eji teknụzụ iji nye onye ọrụ ọ bụla ihe na-agbanwe agbanwe yana ịtụgharị atụmanya n'ime ndị ahịa ogologo ndụ. CXM gụnyere ahịa inbound, ahụmịhe weebụ nke ahaziri iche, yana usoro mmekọrịta ndị ahịa (CRM) iji tụọ, tụọ ma nyochaa mmekọrịta ndị ahịa.
16% nke ụlọ ọrụ dị na-abawanye dijitalụ ahịa dijitalụ ha ma na-emewanye mmefu ego. 39% nke ụlọ ọrụ na-aba ụba mmefu ego dijitalụ ha site na itinye ego ha dị n’ime ahịa dijitalụ. Dị ka ndị na ọnụ ọgụgụ ndị ọzọ si a Nkwupụta 2013 sitere n'aka Society of Digital Agencies, ike itinye aka na nloghachi na ntinye ego maka ịre ahịa n'ịntanetị karịrị uru mbụ nke mgbasa ozi ọdịnala dịka TV, akwụkwọ akụkọ, bọọdụ mkpọsa ma ọ bụ redio. Inwe ike ịmepụta njikọ 1 na 1 na ndị ahịa, nke a ga-achọ na nke ugbu a, agbanweela ahịa na azụmaahịa ụwa. Ihe niile ga - ekwe omume site na CXM.
Igodo na-aga nke ọma CXM
Na-adọta ndị ahịa ọhụrụ na saịtị gị - N'iji usoro atumatu inbound gosipụtara, ndị ahịa ọhụụ ga-eweta na saịtị gị site na mgbasa ozi mmekọrịta, SEO, blọọgụ, vidiyo, akwụkwọ akụkọ ọcha, na ụdị ahịa ahịa ndị ọzọ.
Na-eme ka ndị ọbịa na ebe nrụọrụ weebụ gị - Weta ozi gị na ndụ ndị ọrụ ọ bụla site na ọdịnaya ọdịnaya maka onye ọbịa ọ bụla dabere na omume ha. Nke a agaghị eme ka ha hụ ozi ha na-achọ, mana ụlọ ọrụ ndị mejuputara atumatu ndị a ahụla mmụba ego na nloghachi nke 148% na ntinye ego ha. Di na nwunye a na enyi na enyi, mmekorita mmekorita ya na usoro ihe di n’ime ya siri ike ma i nwere ebe siri ike ibanye n’ire ahia na ahia gi.
Mmejuputa ndi Salesforce CRM - Ngwa CRM na-arụ ọrụ dị ka ogige nke ọgụgụ isi ndị ahịa niile, nke na-enyere ụlọ ọrụ aka ị nweta data dị mkpa site na mbọ ahịa niile ma bawanye arụmọrụ nke mbọ ahịa ha.
Ijigide ndị ahịa na atụmanya - Site na itinye aka na-arụsi ọrụ ike ma ọ bụ mgbasa ozi "aka", a ga-eme ka njigide ndị ahịa ugbu a. Ojiji nke iji akpaka ahia na ndi oru ugbua n'ime ahia ahia gi bu ihe aga nke oma na njigide ndi ahia.
Tags: Otu 2013 nke ụlọ ọrụ dijitalụ na-akọ2013 soda akụkọCRMnjikwa ahụmịhe ndị ahịanjikwa mmekọrịta ndị ahịacxmteknụzụ galvingalvintechọha nke ụlọ ọrụ dijitalụSoDa
Gary Galvin bụ onyeisi oche na onye guzobere Teknụzụ Galvin - ụlọ ọrụ weebụ na ngwanrọ na Indianapolis, IN. Ọ malitere ụlọ ọrụ ahụ na ọhụụ nke inwe ụlọ ọrụ nke setịpụrụ ụkpụrụ maka etu esi arụ ọrụ nke ọma. Site n’ilekwasị anya na iwulite usoro ihe omume sọftụwia siri ike ma hụ na nnyefe oge na mmefu ego, Galvin Teknụzụ enweela ike bụrụ onye ndu na ụlọ ọrụ ahụ. Gary sitere na Detroit, MI mana ọ na-enwe obi ụtọ ịkpọ Indiana n'ụlọ ya na nwunye ya na ụmụ ya anọ.